Egwurugwu Golf Golf Golf kọwara
Na-akọwa Usoro Ịgba Egwuregwu Bramble Golf
Ụdị ọkpụkpụ 4-onye na-ejikọta ihe ndị na-eme ka ọkpụkpụ na nke kacha mma
Ị nwere ike iche echiche nke usoro nkwekorita golf na-agba chaa chaa na ngwongwo kacha mma . Osisi ogwu ahu na amalite na ndi otu ndi na-egwu egwu nke oma, ma site na mgbe ahu o bu ihe obula obula n'ime onwe ya. Otu ma ọ bụ karịa ala bọọlụ nke n'akụkụ gụọ dị ka otu akara.
Ngwurugwu ogwu a na-aga site n'aha " chagba ." Ee, osisi ogwu na a na-agba chaa chaa bụ otu ihe ahụ.
Egwuregwu ndị na-egwu egwu na-ejikarị ndị otu 4-egwu egwu egwu.
Ngwurugwu na-amalite dị ka ihe atụ na-ehichapu tee
Kedu ihe anyị na-eche site na "na-akụpu tee"? Dị ka a na-agba ọsọ na-agba egwu, na nchịkọta ọkpụkpụ ọ bụla golfer na otu ahụ na-apụ. Ndị otu a na-atụle ihe nke ndị ọrụ anọ ahụ: Ònye kụrụ ụgbọala kacha mma? Ndị otu ahụ na-ahọrọ ụgbọala kachasị mma, na ndị ọzọ atọ so na-akpọrọ bọl golf ha ma mee ka ha gaa ebe kacha mma mbanye.
Mgbe ahụ, ndị gọọmenti anọ na-egwu ụfụ nke abụọ site na ebe ahụ, dịka ị ga-esi na ya.
Ma Mgbe nke ahụ gasịrị, Bramble ahụ bụ 'Ngwongwo Nhazi'
Na - eso "mmalite nke tee" - mgbe ndị otu otu kụrụ aka nke abụọ - ọ bụ gọlịl mgbe niile. Nke ahụ pụtara na onye ọ bụla golfer na-egwu bọl ya, site na ebe ọ na-adị, na ọrịa ọ bụla ruo mgbe a na-akpọ bọl ahụ.
Ya mere: Kpoo draịva ahụ, họrọ ụgbọala kachasị mma na ndị gọọmenti anọ na-egwu site n'ebe ahụ na ọrịa strok abụọ; n'ihi na Egwu atọ ruo mgbe a na-akpọ bọmbụ ọ bụla, ọ bụ nanị gọọmenti ọ bụla.
Iche Egwu Na Ngwá Agha Egwu
Ihe si na nkedo ọ bụla bụ mkpụrụ anọ (maka otu mmadụ anọ), otu maka golfer ọ bụla na otu. Kedu ihe dị mkpa dị ka ndị otu?
Ụdị ụzọ na-emepụta ihe nwere ike ịdị iche iche. Egwuregwu ụyọkọ egwuregwu nwere ike ịbụ otu obere ìgwè nke ìgwè ahụ, obere bọọlụ abụọ ahụ, ma ọ bụ mgbanwe ọzọ dabere na ntụziaka nke onye nduzi nhazi.
Otu mgbanwe dị na mkpịsị ugbo nke a na-ejikarị eme ihe bụ 1-2-3 Best Ball nke isi: Otu obere bọl n'etiti ndị otu na akpa akpa, mgbe ahụ, ọnụ ala abụọ (ejikọtara) na oghere nke abụọ, mgbe ahụ, atọ ahụ obere bọọlụ (jikọtara) na oghere nke atọ, na nha nke anọ ntụgharị ahụ ga-amalite.
Kedu uru ndị a na-enweta site n'usoro ogwu? Egwuregwu ịgba chaa chaa kwesịrị ịbụ ntakịrị ngwa ngwa karịa bọl kacha mma n'ihi na ndị gọọmenti anọ ga-egwu site na ọnọdụ dị mma maka agbapụ nke abụọ ha (ma ọ bụrụ na ihe egwu anọ niile dị egwu).
Otú ọ dị, osisi ogwu ahụ na-enye onye ọ bụla golfer na otu egwuregwu "ezigbo golf" (n'adịghị ka a na-atụgharị). Nke ahụ bụ n'ihi na site na nke abụọ ọkpụkpụ ahụ, onye ọ bụla golfer na-egwu egwu, nke ọma, ezigbo golf: na-egwu bọl ya ma ọ bụ na-egwu ọkpụkpụ ọ bụla.
Iwu nke iri na otu: Ebe obibi mmiri
Vault Amanar na Gymnastic Competition
Bodybuilding Definition: emegide-Catabolic Njirimara
Ụgha Na-emekarị Na Ijeri Ụgwọ
Ndị NHL Ndị Na-ahụtụbeghị Stanley Cup
Ihe na-agba ọsọ
Otu esi eme ka imata ihe zuru oke na mmeme ntụrụndụ
Ịkụcha Gọlfụ Na-aga: Nke Na-eme Ka Ọkpụkpụ na Mmetụta Na-apụta
Egwuregwu Gọshịị Na-emeghị Ihe Omume na Dumbbell
Atụmatụ asatọ maka Nchekwa Osisi Na-agba
Ebube Egwu Mountain 6 kacha elu
Nchọpụta Ngwọta Neutral Definition
Juz '22 nke Quran
Olee otú Iwu Ụlọ Akwụkwọ si emetụta Ịkụzi na Ịmụta
Bee vs. Wasp: Esemokwu na ihe dị iche
Ntuziaka nke Onye Amalite na Ihe Osisi
Kedu ihe bụ Blue Dog Democrat?
Kedu Oge Nkịtị Na-ekwu na Chọọchị Katọlik
Ọrụ Nri na Ọganihu nke Ụmụ Mmadụ
Gịnị bụ biakwa obibia?
Ọnwụ Ọgụgụ Na-eduba ná Ngụcha Ọrịa
Olee otú "Aka a Na-adịghị Ahụ Anya" nke Ahịa Na-eme, ma Ọ Bụghị, Na-arụ ọrụ
Gọọmenti Gọọmenti Spelman GPA, SAT na ACT Data
Nkọwapụta nke Peter Pan Ballet
Otu Nchịkọta Ball: Ndi Iwu nke Goofu Na-egbochi Ịgbanwe Bọọlụ n'oge Akara?
Agha Obodo Amerịka: Brigadier General David McM. Gregg
Ugbo egwu egwu
10 Ajụjụ Ajụjụ Ajụjụ Ị Pụrụ Ịjụ Onye Na-ajụ Ajụjụ
Ihe dị na akara ngosi
Nkọwa nke Racism
5 Mmemme Nlekọta Na-aga nke Ọma Maka Ụmụaka Na-amụ
Ihe ị ga-atụ anya na 'arụ ọrụ maọbụ ọ bụla' Kpọọ oku
Franchise Tags na Transition Tags na NFL
Nduzi maka ememe Afọ Ọhụrụ Chinese
Agha Ụwa nke Abụọ Homefront: Ụmụ nwanyị nọ n'ụlọ
Ihe Ị Kwesịrị Ịma Banyere Mills Ọgwụ